Uma ilungu noma umqashi ebona ukuthi ilungu elithile alisakwazi ukwenza umsebenzi walo ngenxa yokungaphili ngokomzimba noma ngokwengqondo, bavunyelwe ukuba baqale uhlelo lokuyeka emsebenzini ngenxa yokugula. La mafomu alandelayo okufaka isicelo kufanele athunyelwe eSikhwameni ukuqala lolu hlelo:
NJMPF Medical Boarding 1
Ifomu eqinisekisa ukuphila kwalowo ohola impesheni yakwaNJMPF
ISikhwama sikhokha imihlomulo yezicelo zemali ngokuhambisana no-Section 37C we- Pensions Funds Act. Lo mthetho wabekelwa ukuqinisekisa ukuthi imihlomulo yabiwa ngokulingana kuzona zonke izingane ezingaphansi kwesandla sakho (okuyiqiniso noma komthetho). La mafomu alandelayo kufanele agcwaliswe izingane ezingaphansi kwesandla sakho ezivumeleke ukuthola imihlomulo bese ebuyiselwa emuva eSikhwameni namaphepha adingekayo okushona kwelunga:
Ifomu Ewubufakazi Bokuphila YakwaNJMPF
Ukufa Benefit kugcwaliswe ifomu lesicelo
Guardian Ifomu Assessment
Amafomu abafundi athunyelwa ngeposi kanye ekuqaleni konyaka kulezo zingane ezivumelekile ukuthola umhlomulo walowo oshonile futhi zithola impesheni yanyangazonke eSikhwameni se-Superannuation. La mafomu asetshenziselwa ukuqinisekisa ubufakazi bokufunda kanti kufanele abuyiselwe esikhwameni ngokushesha. Ukuhluleka ukukwenza lokhu kungaholela ekumisweni kokukhokhwa kwemali yempesheni. Ukugcwaliswa kwamafomu kungenziwa futhi nasemahhovisi eSikhwama ngokusizwa abasebenzi base – Client Services.